Multi gas detector Factory - China Multi gas detector Manufacturers, Ndị na-eweta ya
Nchọpụta Nchọpụta Ọdịdị: CH4 \_ O2 \_ CO \_ H2S \_ CO2 \_ SO2, okpomọkụ 1. Igwe mgbapụta dị ike na-enye mmụba na-aga n'ihu 2. Mmetụta okpomọkụ pụrụ iche 3.Can chọpụta gas dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ. Nhọrọ sensọ dị iji tụọ ọsọ ikuku, nrụgide na iru mmiri. 4. Ihe mmetụta dị elu dị na ya dị 5. 5. Tianyun TS-CLOUD dakọtara nke ọma usoro nhazi usoro 6. 24 awa ndekọ ngwa ngwa ngwa ngwa 7. Ngosipụta ngosi dị elu 8. Rough polycarbonate sh ...
1. Igwe ọkụ ahụ dị ike na-enye mmụba na-aga n'ihu 2. Mmetụta okpomọkụ pụrụ iche 3.Can chọpụta gas dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ. Nhọrọ sensọ dị iji tụọ ọsọ ikuku, nrụgide na iru mmiri. 4. Ihe mmetụta dị elu na-ebubata 5. Tianyun TS-CLOUD zuru ezu dakọtara usoro nhazi njikwa akpaka 6. 24 awa ndekọ ngwa ngwa ngwa ngwa 7. Ngosipụta ngosipụta dị elu 8. Rough polycarbonate shell, dị mfe ijide 9. Nnukwu bọtịnụ kwesịrị ekwesị. iji rụọ ọrụ na aka 10. Uni ...
Ikuku Multi-Gas Detector CD4X
Model Model CD4X Brand: TOPSKY Ngwa: A na - eji CD4X nwalee CH4 (0-4%), CO2 (0-5%), CO (0-1000ppm), O2 (0-25%) n'otu oge. Ngwaọrụ a nwere ntụkwasị obi ma dịkwa mfe iji. O kwesịrị ekwesị maka mgbawa gas na kol na ikuku na-egosipụta ọnọdụ dị egwu. You nwere ike kpọgidere ya na coal na-egwupụta arụ ọrụ ihu ma laghachi n'okporo ụzọ ikuku. Njirimara Ngosipụta: Ngosiputa Ngosipụta: ahịrị abụọ, ọnụọgụ anọ, 2,3 anụ ọhịa uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, can nwere ike ịhụ nke ọma n'ime mita 30. 200-1000Hz Frequency na RS485 waya data ...
onye nchọpụta ihe na-ebugharị gas na-ebugharị CD4A
Iru eru: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ na-àmà Certificate Nnyocha Asambodo Model: CD4A nkọwa 1.chọpụta CH4, O2, CO, CO2 n'otu oge 2. 2-afọ akwụkwọ ikike 3. Kemeghi ala na elu mkpu setpoints 4.Exibd m IP54 Ngwa : CD4 (A) onye nwere ike inweta igwe nwere ọtụtụ gas bụ ngwa nchekwa na ihe mgbawa na emebe ya iji gbochie gas. O nwere ike n'otu oge nyochaa ihe ruru ikuku anọ dị na ikuku gụnyere carbon monoxide (CO), oxygen (O2), combu ...
iR119 ikuku gas na-achọpụta ihe
Ihe ndị dị mkpa: iR119 bụ nnyefe ikuku dịpụrụ adịpụ nke ikuku dị omimi nke nchọpụta gas, ezigbo oge nnyefe data site na ihe ntanetị modul etinyere, jiri sọftụwia nlekota, onye nnata nwere ike n'otu oge PAD IR119 bidirectional data nnweta na njikwa, nye ezigbo- ozi nchọpụta oge ma mee ka mgbama mgbaàmà rụọ ọrụ mgbe ikuku nyocha nlele gas. IR119 nwere mmemme mmemme ma nwee ike ịnabata ihe mmetụta elekere ise na ise nwere ike iji chọpụta gas na-egbu egbu ...
VOC ndị na-emepụta ihe na-emepụta gas
Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agba akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo Model: iGas Pro PID VOC Ngwa: iGas Pro PID na-anọchite anya teknụzụ PID dị elu. m Gas Pro PID VOC bụ obere njirimara VOC na ụwa. Ọ nwere ike ịchọpụta ụdị VOC niile n'okpuru ọnọdụ nke okpomọkụ na iru mmiri dị iche iche. Nnwale ahụ bụ ngwa ngwa, nke a pụrụ ịdabere na ya. Ọ metụtara ọnọdụ ọrụ dị egwu ebe gas na-egbu egbu ma ọ bụ nke na-ere ọkụ dị. Ọ nwere ike inye e ...
Atụmatụ: ofdị nha ruru ụdị 10 You nwere ike ịlele ọsọ ọsọ ikuku ikuku multifunction gas nchọpụta Wuru n'ime mgbapụta ihe atụ, nwere ike ịnwe oke ohere nlele anya batrị Replaceable batrị, ọ dịgidere 120H obere ngwaọrụ methane, carbon dioxide, sọlfọ dioxide, oxygen, carbon monoxide, hydrogen sulfide, ọsọ ikuku, okpomọkụ, iru mmiri, nrụgide nke ikuku. Nnukwu 3.7-in ...
Port4 CH4, O2, CO, H2S multi-gas detector CD4
Ngwa: Onye na-achọpụta ihe ikuku gas na-ebugharị CD4 bụ ihe eji eme ihe na-adịghị mma ma gbawaa mgbawa ma hazie ya iji gbochie gas. Ọ nwere ike n'otu oge nyochaa ihe ruru ikuku anọ dị na ikuku gụnyere carbon monoxide (CO), oxygen (O2), gas na-ere ọkụ (% LEL), na hydrogen sulphide (H2S). Kọmpat na nke dị fechaa, CD4 nwere ike ịnwepụta ọtụtụ ihe na-eme ka ndị na-anụ ihe, ndị na-ahụ anya na ndị na-ama jijiji mee ihe na ọnọdụ nke mkpu mkpu dị ala ma ọ bụ dị elu CD4 obere Multi-gas detector enweghị atụ i ...
CTL1000-100 CO & H2S nyocha ọtụtụ gas
Nọmba Model: CTL1000 / 100 Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agba akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo CO & H2S multigas detector CTL1000 / 100 ihe intrinsically mma na mgbawa na-egosi na ngwá na e mere na-achọpụta CO & H2S na coal m gburugburu ebe obibi. Site na ihe mmetụta electrochemical dị, ọ na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ na oke ziri ezi. Kọmpat size na fechaa eme ka ọ dị mfe na-ebu na n'akpa uwe ya shockproof, ọ bụ nchebe na inogide na iji. A na-eji ya na ...
CYT25-1000 O2 & CO nyocha gas
Nọmba :dị: CYT25 / 1000 Qualities: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agba akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo CYT25 / 1000 O2 & CO gas nchọpụta bụ intrinsically mma na mgbawa na-àmà ngwá na e mere na-achọpụta O2 & CO na unyi m gburugburu ebe obibi. Site na ihe mmetụta electrochemical dị, ọ na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ na oke ziri ezi. Kọmpat size na fechaa eme ka ọ dị mfe na-ebu na n'akpa uwe ya shockproof, ọ bụ nchebe na inogide na iji. A na-eji ya na un ...
CJT-4-1000B Methane CH4 & Carbon Monoxide CO gas Detector
Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agbawa akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo nọmba: CJT-4 / 1000B Ngwa: CJT-4 / 1000B obere CH4 ＆ CO na 1 gas nchọpụta bụ ihe eji eme ihe ọfụma na mgbawa na-egosi na ọ bụ iji gbochie gas. . Ọ nwere ike n'otu oge Monitors carbon monoxide (CO), combustible gas (% LEL). Kọmpat na fechaa, CJT-4 / 1000B obere CH4 ＆ CO na 1 gas nchọpụta na-eme ka mkpọtụ a na-ahụ anya na nke ọhụụ na-eme ma ọ bụrụ na ọ dị ala ...
Methane & Oxygen 2 CH4 ＆ O2 na 1 gas Detector
Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi Asambodo Nnyocha Asambodo nọmba: CJYB4 / 25 Ngwa: CJYB4 / 25 obere CH4 ＆ O2 na 1 gas nchọpụta bụ ihe intrinsically mma na mgbawa-àmà na-egosi na ngwá na-iji gbochie gas. Ọ nwere ike n'otu oge nyochaa oxygen (O2), gas combustible (% LEL). Kọmpat na fechaa, CJYB4 / 25 obere CH4 ＆ O2 na 1 gas nchọpụta na-eme ka mkpọtụ a na-ahụ anya na nke ọhụụ na-eme ma ọ bụrụ na ọnọdụ mkpuchi dị ala ma ọ bụ dị elu. CJ ...